Salad "ikhandlela": iresiphi
Salad "amakhandlela Christmas" - ke Liyindawo appetizer enhle ukuthi nakanjani umphelelisi etafuleni lakho iholidi. Ukwenza lokhu dish kungaba ezahlukene. Sanquma ukwethula wena ezimbalwa ongakhetha angadingi enkulu izindleko imali nesikhathi.
Salad "amakhandlela Christmas": igxathu negxathu iresiphi
Ukuze kulungiswe isidlo kungenzeka usebenzisa izingxenye ezahlukene. Into esemqoka nalokhu - ukwakha kahle. Phela, kuphela uma ubonisa umcabango, uthola i dish engavamile, okuyinto ngokuqinisekile baziswa yibo bonke izivakashi zakho abamenyiwe.
Ngakho, isaladi "Christmas ikhandlela" kudinga:
amazambane naphakathi - 3 PC.
amaqanda ezinkulu inkukhu - 3 PC.
anyanisi aphakathi - 1 pc.
Bulgarian upelepele obomvu - 1 pc.
utamatisi fresh - 2 PC.
apula uviniga - 60 ml;
ethinini walondoloza (emafutheni) - 1 amabhange;
ikhalori imayonnaise - ukunambitha;
dill fresh (ukuhlobisa) - ugodo ezinkulu;
ukhilimu ushizi (ngesimo amapuleti) - 3 PC.
imbewu emhlophe - nedlanzana (ngokokuhlobisa).
Ukuze isaladi "Christmas ikhandlela" Kwatholakala hhayi kuphela enhle, kodwa futhi simnandi kakhulu, zonke izithako zako kufanele ngokucophelela ngayo. Ukuze wenze lokhu, ubilise medium jacket amazambane kanye namaqanda. Esikhathini esizayo, kokubili imikhiqizo zidinga cool, ikhasi grate on grater ezinkulu.
Kufanele futhi kube mahhala kusuka red pepper umoba bese uthathe therefrom 3 locezu ezikhangayo, okuyinto abakhonza amalangabi. Ezinye izindaba zika-imifino Kunconywa ukuba fake Chop. Ngo ncamashi ngendlela efanayo udinga nquma notamatisi fresh.
Kepha umnsalo, khona-ke kufanele ahlanze futhi uthathe cubes. Uma wayefisa, umkhiqizo marinate e apula uviniga. Lokhu kuzokwenza isaladi a okubabayo futhi okumnandi.
Phakathi kwezinye izinto, kubalulekile ukuba balungiselele futhi ethinini okusemathinini. Kufanele asuswe imbiza Mash ngemfoloko kwesokudla kanye namafutha. Uma ufuna kancane okunama-kilojoule amaningi dish, khona-ke zonke ketshezi ungakwazi likhanyelwe kusengaphambili.
By endleleni, abanye besifazane ukwenza isaladi "Christmas ikhandlela" akuyona ethinini nokusebenzisa saury, salmon, sprats emafutheni, mackerel nokunye.
Salad "amakhandlela Christmas" kabani isithombe okwethulwa kulesi sihloko kufanele abunjwe kancane kancane. Okokuqala sidinga ukwenza kube main umhlobiso - amakhandlela. Lokhu kudinga ukuba uthathe ipuleti ushizi elicibilikile, ngesandla esivulekile gcoba kubo imayonnaise ufafaze Iqanda yashizi. Khona-ke umkhiqizo kumele iphuma ibe tube bese uxhume engxenyeni engenhla ilangabi, okungukuthi, tincetu upelepele obomvu.
Bakha isidlo olungaqinile
Ngemva amakhandlela ushizi zilungele, kufanele uqhubeke ekwakhekeni wonke isaladi. Ngenxa yalesi ethinini okhamiwe wahlanganiswa ekuphambukeni edingekayo ngokulinganayo ukusabalalisa ebusweni side hhayi ipuleti flat, bese alisibekele yashizi anyanisi zifakwe emanzini anosawoti bese amazambane. Okulandelayo, udinga ukubeka izingqimba alandelayo: pepper isiBulgaria, utamatisi fresh neqanda ogayiwe. Kulokhu, zonke izithako, kuhlanganise zakamuva, kufanele ngobuningi nivame okunama-kilojoule amaningi imayonnaise.
Hlobisa isidlo samaholide
Ngemva isaladi "ikhandlela Christmas" uzobe kwakhiwa, kufanele uqale yomhlobiso wawo. Ngenxa yalesi esenziwe ngaphambili ushizi ikhandlela kudinga ngokulandelana lunamathele isidlo. Ngokulandelayo, bonke ubuso ukuba camera Ungadla dill fresh, okumele phambili kakhulu hashaza anikine. Ekuphetheni esiphundu isaladi samaholide Kunconywa balifafaze esincane garnet okusanhlamvu.
Ungadla for dinner iholide
Njengoba ubona, akukho eziyinkimbinkimbi mayelana ukwenza isaladi Christmas "Spark". Recipe Ungadla kufanele khona cookbook kuzo zonke besifazane. Ngemva uyisebenzisa, ungakwazi kalula futhi ngokushesha amboze itafula yangempela zemikhosi.
Ngemva isidlo ukuba kuphekwe, kuyinto efiselekayo ume imizuzu engaba ngu-90 kule esiqandisini. Uma ushiya isaladi okwesikhathi eside, ushizi kungaba zavetritsya amakhandlela kungabi kumnandi.
Khonza lokhu elimnandi isidlo izivakashi mhlawumbe ngaphambi ukudla okushisayo kanye nocezu lwesinkwa.
Lasekuqaleni isaladi "ikhandlela": iresiphi ngesithombe
Njengoba kushiwo ngenhla, ungenza isidlo ngezindlela eziningi. I version zakudala ekuwulungiseleleni seyenziwe ngenhla. Manje ngifuna ukunitshela indlela yokwenza isidlo la Carte Christmas usebenzisa inombolo okungenani izithako.
squid eqandisiwe noma fresh - 4 isidumbu isilinganiso;
crab inyama izinti noma - mayelana 100 g;
amaqanda amakhulu - 4 PC.
isanqante owayemude medium - 2 PC.
ukhilimu ushizi - 2 briketika;
Garlic - ambalwa tincetu elincane;
imayonnaise, ukhilimu omuncu - ukunambitha ukusebenzisa;
ushizi kanzima - 50 g;
red pepper - obuncane.
Ngokuba ukulungiswa okunjalo appetizer engavamile , sidinga 4 izidumbu squid. Uma kwathengwa eqandisiwe, kufanele uqiniseke ukuthi iqhwa elisenyameni. Khona-ke umkhiqizo liyadingeka begeza futhi ihlanzekile. Ngemva kwalokhu, ngo ikhanzi ukubilisa amanzi, kancane usawoti yayo, bese yehlisa squid isidumbu ngoba ncamashi amathathu imizuzu. Ngemva kwesikhath kwesikhathi edingekayo ukususa kwasolwandle futhi epholile.
Ukucubungula izithako asele
Nakuba squid kuphole, kufanele uqhubekele decoction amaqanda ezinkulu kanye izaqathe fresh. Ngemva ukwelashwa ukushisa lezi izithako zigezwe futhi grate on grater ezinkulu. Futhi kudingeka ukwenza ukhilimu noshizi kanzima. Nakuba kungcono ugaye wawayisa grater emihle.
Phakathi kwezinye izinto, ke kufanele ahlanze ngokwehlukana upelepele obomvu wayinquma zibe tincetu, ezifana nezilimi.
Ngokuqondene nenyama crab noma izinti, kumele incibilikiswa sengathi base simisiwe bese fake nquma.
Ngaphambi kokuqhubeka kumiswa ukudla okulula, isaladi kufanele wayixova kahle. Ukuze wenze lokhu kwelinye dish ufuna ukushicilela zingxenye ezilandelayo: ushizi kusetshenzwe, amaqanda, izaqathe abilisiwe, crab izinti noma inyama futhi chives olwembiza. Khona-ke zonke izithako okudingayo ukuze ukunambitheka imayonnaise uhlanganise kahle. Ngenxa yalokho, kufanele uthole isaladi elimnandi kakhulu futhi esihlwabusayo.
Ukuze wakhe owakho amahle Christmas izitsha
Ukuze isaladi nge crab izinti, kufanele uqhubeke ngqo ukwakheka izitsha. Ukuze wenze lokhu kakade selehlile izidumbu squid ezohlukaniswa ngesigamu ukuze uye indandatho ezimbili ezijulile. Kufanele uyogcwala mass ngaphambilini walungisa futhi libekwe isidlo flat. Phela izidumbu ukuthola bobunjwa oyindilinga, kufanele ufafaze fake yashizi ushizi kanzima. Esikhathini esizayo, phezulu "ikhandlela" ngamunye liyadingeka unamathele eyodwa nocezu upelepele obomvu. It ngeke belingisa amalangabi.
Indlela ukwethula ukuba kuphele isidlo iholidi?
Lungiselela ukudla okulula, kufanele kube kwamahora ambalwa ukubeka efrijini. Khonza lokhu dish kungaba yokuqala Christmas futhi jikelele kalula, futhi ingxenye Saucers. Uma unquma ukusebenzisa inketho yokugcina, emaphethelweni izitsha, ungakwazi ukuhlobisa amahlumela ngesikele sokuthena of dill fresh, ukwakha kuwo uhlobo Wreath. Futhi, kutuswa ufafaze hlamvu ambalwa nepomegranati ezivuthiwe. Ujabulele ukudla kwakho!
Salad "Gourmet". Ungadliwa for etafuleni iholide, futhi ngosuku ngalunye
Salad nge izimfanzi ethosiwe: zokupheka
Life kanye lokusungula Bunin. Izihloko Ukudala Bunin
4 amaphutha ukuthatha ukuzinakekela, ukuthi amadoda enze ehlobo
Indlela ngemvume imvilophu: amathiphu namasu
Esivikela osongweni zabo ukuphathwa kwezokuphepha siqu
Kuyini i-angina ehlanzekile?